ZES Ambatondrazaka : tadiavin’ny Sinoa hitrandrahana fasimainty | NewsMada
ZES Ambatondrazaka : tadiavin’ny Sinoa hitrandrahana fasimainty
Miahiahy ny mponina ! Voizin’ny fitondrana mafy ny Faritra toekarena manokana (ZES) ankehitriny. Anisan’ny hametrahany an’io koa ny any Alaotra. Nandray fitenenana nandritra ny “hetsika ho an’ny fanovana”, ny 12 mey teo, Andriambololonirina Marion, mponina avy any Andrangorona, kaominina Ambohidava, distrikan’Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro. Nambarany fa anisan’ny hananganana ny ZES any Andrangorona, efa tsy lavitra ny alan’i Zahamena (faritra arovana), lavitry ny lalam-pirenena faha-44. Manampy izany, efa mihaodihaody any Andrangorona ny Sinoa ary voalaza fa hitrandraka fasimainty. Mampandre ny rehetra izy, dieny tsy mbola mitranga ny tokoa.
Nomarihin’Andriambololonirina Marion fa tsy manana afa-tsy io toerana kasain’ny fitondrana hametrahana ZES sy tadiavin’ny Sinoa hitrandrahana fasimainty io ny mponina. Toerana hambolena voanjo, tongolo, mangahazo,… sakafo foto-pivelomana.
Notsiahiviny koa tany Andrangorona ny nisian’ilay raim-pianakaviana nitarika fikambanana miady amin’ny halatra omby ka notapahin’ny dahalo telo ny fatiny. Azo an-tsaina amin’izany ny ao an-dohan’ny mponina any amin’ity fokontany ity.